Ukuphupha ngololiwe Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Abantu kunye neempahla bahanjiswa ngenkqubo yothutho kaloliwe. Umgaqo kaloliwe kudala waba yindlela eyaziwayo yokuhamba kohambo olufutshane, kodwa nakwiiholide. Oololiwe abade kangangeemitha neenqwelo zabo ziwela emaphandleni kwiiporo zikaloliwe.
Umgaqo kaloliwe unokubonwa rhoqo kwi el mundo amaphupha, umzekelo, xa kufikwa kumba wokuhamba.
1 Uphawu lwephupha «kaloliwe» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «kaloliwe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «kaloliwe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «kaloliwe» - ukutolikwa ngokubanzi
Zininzi izinto zokwenza amaphupha ezenziwayo ngololiwe kunye nezikhululo. Oku kuhlala kunjalo Uhambo lobomi yephupha, eboniswe apho. Ukuba umphuphi uthatha uloliwe ngokwakhe, uya kuqhubela phambili kakuhle kwaye ngokukhawuleza kuhambo lobomi. Ukuba iphupha liza kukhanya, liya kufikelela kwinjongo yalo kwihlabathi lokuvuka. Ukuba ubuthongo bukhumbula uloliwe, mhlawumbi uya kuphoswa lithuba elihle ekuvukeni ubomi ngokunjalo.
Ukuba iphupha libona uloliwe ebaleka kwihlabathi lamaphupha, oko kuhlala kufuzisela ugxothiweizakulungelelanisa kungekudala kwihlabathi elivukayo. Ukuba umzila kaloliwe ushiya ngqo kwitonela, oku kuthetha ukuba eli phupha liza kufunda imfihlo kungekudala.
Ukuba iileyili zivaliwe ngumqobo, iphupha libonisa ukuba ukuphupha kudlala umdlalo ongalunganga. Ukuba ulingqina lobuphupha kwintlekele yomgaqo kaloliwe, iindaba ezimbi zibhengezwa zivela kumhlobo okude.
Uphawu lwephupha «kaloliwe» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, umzila kaloliwe wephupha ubonisa isimo sengqondo ngobomi kunye namava obomi aphupha. Ukongeza, lo mgaqo kaloliwe ubonelela ngolwazi ngamandla alo kunye nawo Ukuqhuba Kunye nexabiso neenjongo ezilandelelweyo. Kule miba izigqibo eziqinisekileyo malunga nobuntu bephupha zinokutsalwa kwaye ukukhula okulandelayo kunokufundwa.
Njengoko uhlala uhamba ngololiwe nabanye abantu, le ndlela yothutho luphawu lwabo intshukumo eqhelekileyo kwindlela yobomi. Iindlela ezizodwa azenzeki ngomgaqo kaloliwe kuba ubotshelelwe kwiiporo. Ukuba umphuphi uyayithanda kwaye uhlala ehamba ngololiwe, inokufundwa ukuba uyakwazi ukuzidibanisa nemixholo yobomi boluntu kwaye ayisebenzisele iinjongo zakhe.
Ngokubanzi, ii-locomotive luphawu lwe Amandla abalulekileyo Itolikwe, ngelixa amava obomi kunye namava obomi abekwa kwiinqwelo. Ixabiso, eliphupha lijolise ebomini bakho kwaye lilungelelaniswe ngokufanelekileyo, limelwe ngumzila kaloliwe.
Ukuba iphupha lifike emva kwexesha kuhambo lukaloliwe, ke uphando lwamaphupha luyalutolika njengophawu lwezakhiwo okanye umsindo owonyuliweyo. Ngamanye amaxesha oku kuyabonakala Ukungaqiniseki yokuphupha ngokunxulumana nabantu onxibelelana nabo nokusingqongileyo.
Uphawu lwephupha «kaloliwe» - ukutolika kokomoya
Umgaqo kaloliwe ufuzisela ukutolika amaphupha okomoya umntu, onenkani kwaye ngamanye amaxesha onenkani. indlela yabo walandela ulwalathiso lwakhe.